Furtuuwwan Qaxxaamura Kuussaa Deetaa
Tarreffamni furtuuwwan qaxxaamuraa armaangadii waliin argama.
Frtuuwwan qaxxaamura waliigala LibreOfficekeessaa dabalataan fayyadami.
Furtuwwan qaxxaamuraa buu'urawwan deetaadhaaf
Gaafata saxaxa keessa
Bal'inawwan gaafataa saxaxa keessa.
Gabatee gaafata saaxaxichaa irraa haqa.
Waliindhaa sararaa fila.
Baafata haalqarichaa bana.
Gabatee yookin gaafata ida'i
Amaloota Too'ata Foddaa
Sanduuqa makaa bana.
Sanduuqa makaa cufa.
Sarara haaraa saaga.
Qaree sarara duraanii keessa qubqchisa
Qaree sarara ittiaanu keessa qubqchisa
Ciicataa dirree keessaa xumuuruun qaree dirree ittaanu keessa kaa'a.
Xiyyeeffannoo gara too'annoo jalqabaatti qindeessa (yoo saxaxa haalata keessa hin taane). Too'annoon duraa unka Naaneessa keessaatti jalqaba ibsamee.
Qaxxaamura qaaqa Murteessa uumuuf
Caancalawwan giduu utaala
Fodda gidduu utaala.
Filannoo dirreewwaan too'annoo
Filannoo dirreewwaan too'annoo kallatti faalaa keessaa.
Too'annoo filatamee saaga.
Too'annoo filatamee ejjetoo keessaatti mm1 kallattii duraa duubatti sochoosa. Qabxii guulaali haalata keessaa,haammamtaa too'annoo filatamee jijjiiraa.
Qabxii gulaalii haalata keessaa, garaqabanoo ittaanuutti utaalchisa.
Qabxii gulaalii haalata keessaa,gara qabannoo duraniitti utaalchisa.
Filannoo ammee gadhisa
Filannoo Tarree ceesisa, yemmuu tarreen quxaala haalata gulaalii keessa.
Filannoo tarree ceesisa
Tarajaa ammee fila
Qaree gara tarree jalqabaatti sochoosa
Qaree gara dhuma tarreetti sochoosa
Title is: Furtuuwwan Qaxxaamura Kuussaa Deetaa